Uri Kuisa Mari Muzvinhu Zvekusimudzira? | Martech Zone
Kupera kwesvondo ndakakokwa nechikwata pa Saiti Maitiro kuva pavari Edge yeWebhu redhiyo show uye kutaura kune vamwe vadzidzi veNew Media Communication avo vakaburuka kubva kuIU Kokomo kuzotaura nesu. Icho chaive chiitiko chakanakisa uye vadzidzi vaifarira uye vakabvunza toni yemibvunzo - kwete chete nezve nyowani midhiya asi nezve bhizinesi rese. Zvaikurudzira zvisingaite kuona kuti vaive neshungu sei.
Pandinoenda kuzviitiko izvi, ini ndinogara ndichiedza kuunza rumwe rudzi rwezvinhu zvekusimudzira. Panguva ino ndauya ne4Gb USB madhiraivha ayo Highbridge yakanga yagadzirwa na ePromos.
Iwo ekushambadzira USB madhiraivha akarova pakarepo uye mushure mekunge vadzidzi vaviri vakavaona, ndaive nechaunga chevadzidzi chakandikomberedza. Vanhu vanoda zvinhu zvekushambadzira… kunyanya kana zvichizobatsira. Kungofanana nekutengesa chero kupi, kune mari yakanaka yakashandiswa uye yakaipa mari yakashandiswa, zvakadaro. Madhiraivha e USB haasi iwo asingadhuri, kunyanya kana ari 4Gb :). Nekudaro, nekupa chinhu chakakosha chekusimudzira, inopa pfungwa yehunhu uye mutsauko watinoda kuti vanhu vabatanidzwe nekambani yedu.
Usaite skimp pazvinhu zvekushambadzira. Inogona kunge iri chiratidzo kune yako tarisiro yekuti iwe ndiwe mhando yevatengesi iyo ichave skimp pavari!
Nezve ePromos: Ini ndarairazve kubva ePromos akati wandei izvozvi uye unonyatso kukoshesa sevhisi yavo uye nezvipiriso zvavo. Iwo madhiraivha akange akadhindwa zvakanaka, akaonekwa kumusoro panguva uye akanyatsoiswa mumapakeji, uye vaive nezvakasimba kwazvo kuraira kwakanyanya. Chimwe chinhu chandinoyemura ne ePromos ndechekuti ivo vanotumira edu "Nguva Yekuhodha-zvekare" maemail anenge mwedzi mushure mekunge waodha chinhu nechidimbu kuti utangezve-odha. Ichi chiyeuchidzo chikuru chekutarisa kupihwa kwako kwezvinhu zvekusimudzira uye kuodha zvekare pazvinenge zvichidikanwa!
Tags: epromosichiitiko chekusimudzira zvinhuushambadzizvinhu zvekusimudziraschwagusb inotyaira
Zvipo zvakatsigirwa zvinovaka nyika yemusiyano wekutengesa sezvo vatengi vachizvichengeta kwenguva yakawedzerwa yenguva yako pane kuzvirasa kana kuzviregeredza sedzimwe kushambadzira.